Inkampani iphrofayela - Zhejiang neTindvuna Filtration Technology Co., Ltd.
Spin On Okokhelekayo Izihlungi
Spin On Amafutha izihlungi
Okokhelekayo Hlunga Elements
Amafutha Hlunga Elements
Okokhelekayo Water Separators
Air Conditioning Izihlungi
Okunye Hlunga Izingxenye
Zhejiang neTindvuna Filtration Technology Co., Ltd.
(Langaphambilini njengoba Zhejiang Rongsun Hlunga Co., Ltd.), yasungulwa ngo-sifundazwe Guangdong ngo-1999, manje itholakala e Jiaxing edolobheni, ingenye amabhizinisi okuholela ezisindayo-duty isihlungi yezimoto umkhakha. Nge-dolobha obhalisiwe eziyizigidi ezingu-30 RMB, ayizinkulungwane 31 square metres workshop nabasebenzi abangaphezu kuka-200, neTindvuna has 10 million ngonyaka ukukhiqizwa umthamo we izinhlobo ezihlukahlukene ehlunga.
Through iminyaka engu-20 'emisha kanye nentuthuko, neTindvuna isungule engaphezu kuka-1000 izinhlobo imikhiqizo, esehlanganise ukwakhiwa imishini, ezisindayo-duty amaloli, amabhasi okunethezeka, imikhumbi, udizili generator amasethi, emoyeni compressors, izitshalo amandla, ukuvikeleka kwemvelo, ukuhlanzwa, kanye nezinye eziningi izindawo izimboni ahlobene. Inkampani iphinda isingathe eziningana abakhiqizi omhlaba bodumo 'OEM ofanayo imisebenzi, ukusungula ubudlelwano obuhle of ukubambisana ne eziningi amabhizinisi owaziwa, kuhlanganise Doosan Group, uPáll Corporation. Manje, neTindvuna ethole ISO9001, IATF16949: 2016 ukuphathwa izinga uhlelo isitifiketi, ISO 14000 kwemvelo Ukuphathwa isitifiketi, engomunye wabayishumi corporations umqondisi we-Chinese yangaphakathi omlilo injini ekomidini inhlangano lemifanekiso, futhi ilungu China Technology Market Association Filtration Nokuhlala Ngokwahlukana Society.
Okuqhubekayo ngaphesheya ibhizinisi kuyinto mission the neTindvuna sika. Sithanda ukwenza izinto ndawonye ngobuqotho nawe ukudala brand omhlaba futhi ikusasa elingcono ngokubambisana!
Strictly Control, Ngokuqhubekayo Ngcono, Ilokhu Ukuqamba, Ukwanelisa Amakhasimende
Hlakulela lwemininingwane yobuchwepheshe ka IATF16949: 2016 ukuze ngokuqinile lelisu nendlela yokuphatha amazinga ukuqinisekisa imikhiqizo nemfuneko yekhasimende.
ngokusebenzisa ukuqeqeshwa, isiqondiso kanye Ukuhlolwa bezikhali abasebenzi, ukuthuthukisa inkampani ngokuqhubekayo kuthuthukiswe ukusebenza ngokuzimisela, ukunciphisa izindleko, futhi uhlale intuthuko eqhubekayo.
Njalo LOKUSUNGULA KANYE KWAMAKHASIMENDE WOKWANELISEKA:
Ngokuqhubekayo amamodeli entsha imikhiqizo efanelekayo ukufeza ngale ikhasimende okulindelwe futhi uthuthukise ukwaneliseka amakhasimende.
Okokhelekayo Hlunga elementi , Engine Okokhelekayo Hlunga elementi Inani , 100 Micron Okokhelekayo Hlunga Elements , Okokhelekayo Hlunga Elements, C0506 Okokhelekayo Hlunga elementi , okusemgqeni Okokhelekayo Hlunga Elements ,